Android N na isi ihe ise | Akụkọ akụrụngwa
Android N na isi ihe ise
Nyaahụ malitere Google I / O 2016, otu n'ime ihe omume kachasị emere taa na ụwa nke teknụzụ na n'ezie otu n'ime ihe ngosi ahụ bụ ngosi ngosi nke gam akporo N, nke dị ugbu a anyị amaghị aha ikpeazụ ya, ihe nke gị onwe gị nwere ike itinye aka n'ụzọ dị mkpa dịka anyị kwuru n'isiokwu a.
Versiondị gam akporo ọhụrụ a adịlarịị na ahịa iji nwee ike ịnwale ma nyochaa ya na ngwaọrụ Nexus, mana anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ugbu a ka enwere ọkwa mgbe Google gosipụtara ụnyaahụ. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha isi akwụkwọ akụkọ anyị nwere ike ịchọta, ọ bụ ezie ee, maka ugbu a ma ọ gwụla ma ịnwere ngwaọrụ nwere akara nke onye na-eme nchọpụta ị gaghị enwe ike ịnwale ha ma ị ga-echere oge ime ya.
Gam akporo N gbara gburugburu isi ihe ise anyị ga-enyocha ugbu a, dị njikere ịmara akụkọ niile gbasara gam akporo N?
1 Multi-window na-abịa na ama anyị
2 Ogwe ngosi ahụ jupụtara na akụkọ
3 Gam akporo N dị nchebe karị
4 Ndị ọrụ ga-ahọrọ aha nke ụdị ọhụrụ ahụ
5 Gam akporo N ga-eze na-abata na September
Multi-window na-abịa na ama anyị
Nke a bụ ma eleghị anya ihe kachasị pụta ìhè nke gam akporo N yana ọ bụ ezie na ọ dịlarịrị na ngwaọrụ ụfọdụ maka ngwanrọ nke ndị nrụpụta dị iche iche, ọ ga-erute smartphones niile na mbadamba na ụzọ ala. Ka ihe atụ, ọ pụrụ ịbụ n'ezie uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ihe abụọ n'otu oge na ngwaọrụ anyị, si lelee vidiyo na YouTube ma kwuo banyere ya site na enyi gị na WhatsApp, ma ọ bụ dee ozi email mgbe ị na-achọ data ọ bụla dị na ihe oyiyi echekwara na ọba akwụkwọ ihe oyiyi gị.
Ekele maka ụdị ikpe nke gam akporo N ma ọ bụ gam akporo 7.0 anyị enweela ike ịnwale ọtụtụ windo. Iji rụọ ọrụ ya, ị ga-pịa bọtịnụ square nke ọrụ ọhụrụ a. Next ị ga-pịa ma jide na ngwa na ịdọrọ ya. Ngwa ị mepere ga-anọgide na elu ihuenyo ahụ, na-ahapụ akụkụ ala nke ihuenyo ahụ n'efu ka ịnwere ike iji ngwa ọzọ rụọ ọrụ na ya.
Ogwe ngosi ahụ jupụtara na akụkọ
Ogwe ngosi ahụ bụ otu isi na ihe kachasị amasị gam akporo, yana ọbịbịa nke gam akporo N ọ agbanweela ọtụtụ mgbanwe dị mkpa. Na ọhụrụ version nke sistemụ nanị site eji ngosi mmanya ala anyị ga-ahụ ụzọ mkpirisi ise na-arụ ọrụ, na-enweghị ịdọrọ mmanya ahụ ọzọ, dịka ọ dị na mbụ. Daalụ Google maka ịnụ arịrịọ anyị na ịghara igbu oge ọ bụla!
Enwere ike dezie ụzọ ndị a ma gbanwee, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume na anyị ga-ahụ ha na gam akporo Stock ma ọ bụ na ọtụtụ ndị nrụpụta nwere usoro nhazi ha nke ukwuu gbanwee ụdị nhọrọ ndị a na nke a nwere akara ntị niile ị na-agaghị achọ ọtụtụ nye ndị na-emepụta mgbe ụfọdụ na-ahọrọ ile anya n'ụzọ ọzọ ma leghara mmezi nke Google na-ewebata na gam akporo, iwebata nke ha.
N'ezie kwa ọ ga - ekwe omume ịzaghachi ozi sitere na ngwa ngwa ngwa ngwa site na mmanya ahụ n'onwe ya, iji zọpụta anyị nsogbu nke imeghe ngwa ahụ. Tụkwasị na nke a, a ga-egosipụta ọkwa, nke na-agbakọkarị, n'otu ụzọ egosiri site na iji obere pịa.
Anyị achọghị imechi ngalaba a na-enweghị ịkwụsịtụ igosi otu akwụkwọ ọhụụ na nke ahụ bụ na gam akporo N, anyị nwere ike mechaa hụ ozi gbasara batrị ahụ na ọkwa ngosi. Nke a bụ ihe ọtụtụ ndị nrụpụta na-etinye na ngwugwu nhazi ha yana nke bara uru maka onye ọrụ ọ bụla, mana Google enweghị ike itinye. Site na ụdị sọftụwia ọhụrụ a anyị ga - enwe ike ihu batrị batrị fọdụrụnụ. Ọzọkwa, naanị site na ịpị na akara ngosi batrị anyị nwere ike ịhụ eserese oriri yana site na ịpị "Nhọrọ ndị ọzọ" anyị nwere ike ịga ozugbo na ntọala batrị.
Gam akporo N dị nchebe karị
Ọtụtụ ndị ọrụ na-ele gam akporo anya dị ka sistemụ enweghị nchedo, na-enweghị ọtụtụ ule n'ezie, kamakwa dabere na ụfọdụ ihe Google mere na-ata ahụhụ n'onwe ya. Otú ọ dị, ọ dị ka nnukwu ọchụchọ ahụ dị njikere ịkwalite nchebe nke sistemụ arụmọrụ ya na ọ bụ ya mere ụnyaahụ na nnọkọ ngosi nke Google I / O 2016 ọ kwusiri ike ugboro ugboro na gam akporo ọhụrụ N ga-enwe nchebe karịa ụdị ọ bụla gara aga.
una ihe ntinye ohuru nke faili a puru ime ka onye oru obula zoputa faịlụ ndi ozo karia izo ya ezo. Nke a bụ naanị nche nchebe mbụ nke Google gbakwunyere nke anyị ga-agbakwunye nchedo gbasaa nke usoro mgbasa ozi nke na-ebelata ọnụọgụ nke ebe ndị na-agba ọsọ na ụdị spyware niile nwere ike ịbanye n'ime ngwaọrụ anyị.
Iji mechie okwu a, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara nchekwa, ọ bụrụ na ọ nwere ike imetụta ya, Google etinyela iwu na gam akporo N ohere ịghara ibudata ma wụnye mmelite ngwanrọ na aka. A na-eme ihe ndị a n'azụ na anyị agaghị echere n'oge ọ bụla nke nbudata na ntinye nke mmelite, naanị ihe anyị ga-elekọta bụ ịmalitegharị ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Nke a anaghị ahapụ ngwa ngwa ọ bụla ma enweghi ndozi nchedo dị mkpa, nke bụ otu n'ime ọtụtụ nsogbu ndị gosipụtara ọtụtụ ndị ọrụ na ọgụ ma ọ bụ malware.
Ndị ọrụ ga-ahọrọ aha nke ụdị ọhụrụ ahụ
Ọhụrụ version nke gam akporo ga-ana baptism ọzọ na aha a na-atọ ụtọ Oge a ọ ga - ebido na leta N. Ọtụtụ n’ime anyị chere na Google emechielarị nkwekọrịta na - adọrọ mmasị maka gam akporo 7.0 ọhụrụ a ga - akpọ gam akporo Nutella, mana ọ dị ka nke a agaghị adị na njedebe ma ọ bụ ibu ibu enyela anyị ohere ịhọrọ aha ndị ọrụ niile.
Maka nke a, o tinyela ibe weebụ ebe anyị nwere ike ịtụ vootu maka aha anyị masịrị anyị ma ọ bụ kwenye nke ukwuu. N'ime ndị niile a na-atụ aro, ihe a ga-eme ugboro ugboro ga-abụ onye Google họpụtara ka ọ mee baptizim ọhụrụ na ugbu a gam akporo N. N'ezie, amaghị m ikpe na Google ga-eme anyị ma chee na kama aha ọzọ ma ọ bụ obere aha na-enwe mmeri na aha jọgburu onwe ya mmeri, Google ọ ga-emekwa ụdị ọhụrụ nke Android aha ahụ?
Gam akporo N ga-eze na-abata na September
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ gara aga Google wepụtara ụdị mbụ nke Android N Onye Mmepụta Preview, nke dị ugbu a nwere ike ịwụnye na Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Nexus Player na Sony Xperia Z3. Nnukwu onye nyocha ahụ egosila na ụzọ gọọmentị ma ọ bụ obere na ọ ga-ewepụta mkpokọta onyonyo onyonyo 5 tupu ịhapụ ụdị nke ikpeazụ.
A ga-ewepụta ihe onyonyo 5 a ruo July ma dịka amụma ga-eme ka mbipụta ikpeazụ, yana Nexus ọhụrụ, na Septemba. Mgbe ahụ anyị ga-ahapụrụ gị ụzọ okporo ụzọ Google maka gam akporo N;
Nyocha 1 (nke izizi, mkpụrụedemede), Machị
Nyocha 2 (mmelite, beta), Eprel
Nyocha 3 (mmelite, beta), Mee
Nyocha 4 (API ikpeazụ na Official SDK), June
Preview 5 (ule ikpeazụ), julaị
Versiondị ikpeazụ na ntọhapụ nke koodu AOSP na ngosipụta nke ọhụrụ Nexus
Banyere Nexus ọhụrụ anyị amatala ọtụtụ asịrị banyere Huawei nwere ike rụpụta ọ bụ ezie na n'oge a enwebeghị ihe ọ bụla dị mkpa nke na-enye anyị ohere ịhụ atụmatụ nke ọnụ ma ọ bụ mara njirimara na njirimara ya.
Ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime ngwaọrụ dakọtara na gam akporo N yana ụdị nsụgharị ya, ịnwere ike iwunye ya ugbu a n'ụzọ dị mfe ma ọ bụ obere ma bido nụ ụtọ ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ nke sistemụ ọhụrụ nke Google nke sistemụ arụmọrụ na-eweta na ya. I nwekwara ike imelite ngwaọrụ gị ka ewepụtara onyonyo ọhụụ ruo mgbe ị ruru nsụgharị ikpeazụ na nke doro anya nke ga-ebuworị akụkọ niile nke ụdị Androiod ọhụrụ a.
Anyị niile nwere ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ nke Andropid na-atụ anya mbata gam akporo N, n'ihi na ya na Android Lollipop, ọmarịcha mmelite bịarutere yana yana Android Marsmallow ndị niile na teknụzụ ndozi ndị dị mkpa, ugbu a na ụdị ọhụrụ nke ngwanrọ Google O yiri ka ihe niile ndị ọrụ chọrọ ga-emecha bịarute ma anyị na-achọ ya ogologo oge.
Kedu ihe ị chere banyere isi akụkọ anyị ga-ahụ na gam akporo N ọhụrụ nke nweburu ọrụ?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na otu netwọkụ mmekọrịta anyị nọ na ya ebe anyị nwere oke ike isoro gị kerịta oge obi ụtọ, na-arụrịta ụka na isiokwu a na ọtụtụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Android N na isi ihe ise
Ọ bụ oge dị mma iji zụta ama ama dị elu?
Moto G4 na G4 Plus bụ ndị gọọmentị